China Ptfe Seals wuxuu Sameeyaa Qalabka Hawada | DSH
Xirmooyinka biyaha, Piston Seals, Soo-saare Soo Saarayaasha Saliidda muddo ka badan 20 sano
& Seal Xirfadle
Polymer waxay xirataa shaabadaha sheyga adkeysiga, PTFE, polyurethane, caag, caag iyo xirmooyinka kale ee lagu tolo
Waxaan inta badan ku hawlan nahay cilmi-baarista, soo-saarista, iyo iibinta shaabadaha ganacsiyada kaladuwan, tusaale ahaan, bastooladaha dhegaha, xarkaha seeraha, xirmooyinka shaashadda, xirmooyinka saliidda cuntada, xirmooyinka mashiinnada mashiinnada sambabaha iyo dareeraha mashiinnada mashiinnada mashiinnada mashiinnada, shaabadaha mashiinnada mashiinnada samaynta, shaabadaha mashiinnada matoorrada , xirmooyinka saliidda, xirmooyinka macdanta dhuxusha, xirmooyinka is haysta, xiridda xargaha, giraan hagyada, shaabadaha PTFE, shaabadaha gubashada guga, shaabbabyada PU, xirmooyinka shaashadda iyo wixii la mid ah. Waxaan abuuri doonnaa silsilado horay loo soo abaabulay oo ku saleysan saamiyada macaamiisha ama muunadaha.
SPG - Mashiinka Canshuuraha ee culus Piston Hydraulic seal
Fiidiyowgaan wuxuu muujinayaa shaabadaha dareeraha dareeraha ee ay soo saarto DSH, oo ah qalabka ugu fiican ee loo yaqaan 'SPG-excavator piston hydraulic piston seal'. Hada fiiri!
Markaanu nahay shaabadda mihnad-yaqaanka, iibiyaha shaabadaysan, waxaan ku siin karnaa dhammaan noocyada shaabadooyinka bistoollada, xarkaha shafka, shaabadda garabka, iwm. Eeg wax dheeraad ah!
Naxaasta macbudka buuxi ee PTFE Wear Strips Guide ayaa cajalado Soosaarayaasha Soosaarka Garaaca Seal
DSH waa hagida hagida hogaamiyaha, soo saaraha hagida hagida, tayada 100%, Hada hubi!
PTA-Custom Elgiloy Helical Gubtay Xilliga PTFE Seal
PTA-Custom Elgiloy Helical Spring Energized PTFE Seal https://dshseals.com
KU SAABSAN DSH
Guangdong DSH Seals Technology Co., Ltd. (DSH), waa shirkad farsamo sareyso oo isku dhafan R
D, waxsoosaarka, iyo iibinta shaabadooyin kaladuwan, waxay ku raaxeysaneysaa qayb weyn oo suuqa ka jirta tartanka maanta qallafsan.
Ilaa hadda, DSH Seals waxay macaamiisheeda u habeysay noocyo badan oo shaabadal ah, noocyada ugu caansanna waa silsilado saliid ah, shaabadaha hydraulic, iyo silsilada 'PTFE' oo ay u kala horreeyaan kuwa warshadaha saliidda, warshadaha hydraulic iyo pneumatic, iyo mashiinno kale. Halkan, waxaan ku soo bandhigi doonaa talooyinkan ku saabsan calaamadaha dadka cusub ee duurka jooga.
Shaqada sumadda saliiddu waa inay joojiso wax alla wixii dareeraha ah ee gudaha ah inay ka soo baxdo bannaanka u dhexeeya xarkaha iyo guriga. Xirmooyinka xiidmaha ayaa loo isticmaalaa in lagu shaabadeeyo furitaanka u dhexeeya qaybaha kala duwan ee dhululubo hawo ahaan, inta badan waxay u dhacaan laba qaybood: shaabad dhaqdhaqaaq leh. Xirmooyinka 'PTFE' waxay muujinayaan waxqabadka wanaagsan ee bay'adaha qalalaasaha leh, heerkulka sare iyo cadaadiska, kiimikooyinka, iyo orodka qallalan. Noocyada kale ee shaabadooyinka ayaa sidoo kale si ballaaran loogu dabaqaa mashiinnada injineernimada, baabuurta, bir-dhiska, alwaaxyada, kiimikada, iyo warshadaha kale.
Iyada oo sannado ah khibrad, khibrad, iyo kooxo injineerro xirfadeed leh, DSH Seals waxay leedahay karti ay ku siiso macaamiisha xalka ugu wanaagsan ee barnaamijyadooda.
U heellan tahay caawinta macaamiisha sidii ay u xallin lahaayeen waxa ugu adag?